musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Guta repasirese uye risingadhuri kutsemuka kweguta
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kuputsa kweguta kunogona kudhura, asi zvese zvinoenderana nekwaunosvika, nemamwe mabhureki eguta ari kudhura zvakanyanya kupfuura mamwe.
Iyo nhamba yekutanga inodhura kwazvo kuzorora kweguta pane runyorwa yaive guta guru reArgentina reBuenos Aires.
Istanbul ndiro guta rechipiri rakachipa pane edu runyorwa.
Imwe nzvimbo yekuSouth America inotora nzvimbo yechitatu, ino nguva Rio de Janeiro.
Kuputsa kweguta ndiyo yakakurumidza kupukunyuka uye mukana wekutora mune yakanyanya tsika tsika, chikafu, husiku husiku, uye kutenga izvo kumwe kunofanira kupa munzvimbo yemazuva mashoma.
Izvo zvinogona zvakare kuve zvinodhura kwazvo, asi zvese zvinoenderana nekwaunosvika, nemamwe mabhureki eguta ari anodhura zvakanyanya kupfuura mamwe.
Saka, ndedzipi maguta anotengeka zvakanyanya kana uri kuronga kutiza muna 2021? Kuti uzive, nyanzvi dzekufambisa dzakaongorora makumi manomwe neshanu epasirose akakurumbira epasirose pamutengo wezvinhu zvakaita sehotera kamuri, kudya kunze muresitorendi, kana doro rinotonhora rakanaka.
Guta repasi rose rinodhura
Iyo nhamba yekutanga inodhura kwazvo guta kutyora pazita iri yaive guta guru reArgentina re Buenos Aires, yaive nyika yakachipa pamutengo wepakati weiri bhodhoro rewaini ($ 3.10) uye tikiti rekuenda kune imwe chete pane zvekufambisa zvemuno ($ 0.27).
Harisi iro chete guta rinodhura, asi iri rakakura, rine guta rine zvakawanda zvekuona nekuita, kusanganisira imba yepamusoro yemutungamiri, Casa Rosada, Teatro Colón opera imba, uye MALBA miziyamu.
Inowanikwa pamuganhu pakati peEurope neAsia kumahombekombe eBosphorus Strait, Istanbul ndiro guta rechipiri rakachipa pane rondedzero, nemitengo yakachipa kubhodhi, kusanganisira $ 0.40 yetikiti rekufamba kana chiyero che $ 0.41 pamakiromita etekisi. .
Istanbul raive guta rinodhura kwazvo reEurope ratakatarisa, neruzhinji rweimwe nzvimbo dzinodhura dziri muSouth America kana kuEastern Europe, saka kana iwe uchida zororo rinodziya reEuropean iro rinopa zvakanakisa zveEast neWest, zvingave zvakakodzera kutarisa !
Imwe yekuSouth America yekuenda inotora nzvimbo yechitatu, ino nguva Rio de Janeiro muBrazil. Rio inobata zita remukurumbira reguta rakachipa kwazvo pane runyorwa rwekunyorera doro, pa $ 1.34, yakakwana yekuzorora pamabhishi eCopacabana kana Ipanema!
Chinhu chinonyanya kukwezva mudhorobha rino chiumbwa chikuru chaKristu Mudzikinuri, nepo vazhinji vachisarudza kushanyira panguva yemutambo weCarnival.
Guta risinganetsi pasi rose rinotyoka
Switzerland inozivikanwa nekuve nyika inodhura, zvakatonyanya mumaguta makuru se Zurich, iro raive guta rinodhura kwazvo kumatekisi ese uye zvifambiso zvevoruzhinji, saka ungangoda kutambanudza makumbo uye kufamba kana ukashanya!
Zvichida hazvifanire kunge zvichishamisa, naZürich ari mumwe wemabhengi makuru nemari yepasi!
Reykjavík inotora yechipiri pane iyo rondedzero yemadhorobha anodhura kushanya, kwaunobhadhara pasi pe $ 200 chete husiku pekugara kwehotera, nedhairisheni yedoro inodhura inodarika madhora gumi paavhareji!
Guta reIceland richiri kufanira kushanyirwa zvakadaro, kunyangwe kutarisa nhoroondo yeguta reViking nekushamisa kwekuvaka kana senzvimbo yekuongorora iyo yese yakasarudzika uye yakanaka nyika.
Rimwe guta reSwitzerland rinotora nzvimbo yechitatu, ne Geneva zvakare kuve nemutengo wepamusoro wekudya muresitorendi, pa $ 30.56 pamunhu (cherekedza kuti iri pakati nepakati-pemugwagwa muresitorendi futi, kwete yechishanu-nyeredzi kuvambwa
Kana iwe uchikwanisa kudumbu nemitengo zvakadaro, iwe unozopihwa mubairo neguta rakanaka rakavakirwa mumakomo eAlps neJuras, nemaonero akanaka eMont Blanc neLake Geneva.